Dawlad Gobaleedka Hir-shabeelle oo dardar ku billaawday qabsoomidda shirarka Tubaha Qaranka – Walaal24 Newss
Maamulka Hir-shaballe ayaa billaabay daadejinta tubaha qaranka ayaa magaalada Jowhar waxaa si dardar leh uga billaawday todobaadkaan shirarka tubaha qaranka oo ay yeelanayaan guddi hoosaadyada iyo Guddiyada Farsamada Tubaha.
Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Hir-shabeelle ayaa guddoomiyay shirka Guddi Hoosaadka Golaha Wasiirada iyo Guddiga Farsamada Tubta Amniga iyo Cadaalada oo lagu gorfeeyay ka mira dhalinta qorshaha horumarinta Dowlad Goboleedka Hir-shabelle.
Intii uu Shirku socday waxaa warbixin la xariirta amniga guud ee Hir-shabeelle laga dhegaystay wasiiru Dowlaha Amniga Gudaha dawlad gobaleedka Hir-shabeelle.
Qorshayaasha sida gaarka ah looga wada hadlay waxaa qayb ka ahaa Tayeynta ciidamada, dib-u-eegista hay’adaha cadaaladda iyo garsoorka, isku xirka hey’ adaha amniga iyo bulshada deeganada Dowld Goboleedka Hirshabelle Iyo maareynta xiliga kala guurka ah ee ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegayaan sugidda amniga dalka.
Dhanka kale, waxaa iyana shir kaa lamid ah maanta yeeshay guddi hoosaadka golaha wasiirrada iyo guddiga farsamada tubta horumarinta arrimaha bulshada.
Dhawaan ayaa waxaa dawlad gobaleedka Hirshabeelle ay noqoday dawlad gobaleedkii ugu horreeyay ee si rasmi ah ugu guulaysta daadejinta tubaha qaranka kadib markii ay arrintaas dhaqan gelinteeda iska kaashadeen khuburo iyo howl-wadeenno ka socda xafiiska ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo dawlad gobaleedka Hir-shabeelle.
Dowladda oo war ka soo saartay Cabsida laga qabo saameynta Fatahaada